Uluhlu lwakho lokujonga uMnyhadala weTekhnoloji oPhumeleleyo! | Martech Zone
Uluhlu lwakho lokujonga uMnyhadala weTekhnoloji oPhumeleleyo!
NgoLwesibini, Aprili 29, 2014 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Kule mpelaveki iphelileyo, sikhabe eyokuqala Umculo, ukuThengisa kunye neTech Midwest Isiganeko (#MTMW) - umsitho apha e-Indianapolis wokunyusa imali yeLeukemia kunye neLymphoma Society ukukhumbula uTata wam esaphulukana naye kunyaka ophelileyo. Esi sisiganeko sokuqala endakha ndasibeka ngoko ke sasisoyikisa. Nangona kunjalo, ihambile ngaphandle kwengxaki kwaye ndifuna ukunika ukuqonda kwabanye malunga nokuba kutheni iphumelele kangaka.
Sithathe isigqibo sokwenza i umnyhadala weteknoloji endaweni ye-avareji, inkomfa ekruqulayo ukuze abantu bakwazi ukuzonwabisa kunye nokuhlala kunye kunokuba babe nesithukuthezi kwiinyembezi yiPowerpoint elandelayo embi. Abazimimzi basenokuba nexesha elinye nabaxhasi ukuvavanya iminikelo yabo… kodwa ngaphandle kweentetho.
Charity -Ngakhathaliseki umcimbi wakho, unokwenza kakuhle ngokuqinisekisa ukuba ingeniso ethile evela kumnyhadala iya kwinhlangano ethile yesisa. Kwimeko yethu, sinikele nge-100% yengeniso kuluntu lweLeukemia kunye neLymphoma. Baye abantu ababekho baqala amaphulo abo okonyusa imali adibanisa awethu! Enkosi # run4doug
Abaxhasi -Ukuba nothando kusincedile ukuba siphume siye kufuna abaxhasi beempawu, amakhadi ezipho, abasebenzi, ukutya kunye nomculo. Sisebenze nabaxhasi ukubona ukuba singazigcina njani iipakeji ngexabiso eliphantsi ngokurhweba nabo-kwaye kuyasebenza!
Indawo Indawo efanelekileyo ibalulekile. Sikhethe ifayile ye- URathskeller e-Indianapolis- indawo emnandi esecaleni ledolophu ehamba kunye nokufikelela kuyo yonke indawo- yayinegadi yebhiya, ibha kunye negumbi lebhola-zonke zinamanqanaba kunye nesandi sokuqhuba umculo. Abasebenzi babekhona ukuze bayenze ibe yimpumelelo kwaye badlula konke obekulindelwe.
Eyobudlelwane boluntu - I-Dittoe PRbasebenze ngokungakhathali iinyanga ukunxibelelana nomabonakude wasekhaya, unomathotholo, amaphephandaba kunye namajelo eendaba kwi-Intanethi ukukhuthaza umsitho. Umsitho ube yimpumelelo enkulu ngenxa yemizamo yabo!
Imidiya yokuncokola -Sithumele phantse yonke imihla kwindawo yethu nakumajelo eendaba ezentlalo ukuqhubeka nokuhenda abantu ukuba beze. Sikwapapashe kuFacebook nakuTwitter ukuqhubela phambili ulwazi. Sisebenze kunye Amaqhinga eSiza, iingcali zophendlo lwasekhaya ezikhuthaze umsitho ngokwasentlalweni nakwezethu Intengiso kunomathotholo.
umculo - Uluhlu lomculo olwahlukeneyo… ukusuka kwiiBlues ukuya eBluegrass kunye neFolk ukuya kwiJazz zazikho. Side saqhuba ikonsathi enenkcazo ephezulu kwiholo lethu lobuchwephesha ukusuka Emoya.
Ulawulo lweMicimbi -U-Steve Gerardi ngumkhuthazi womnyhadala wendawo kwaye wayesazi yonke into efuna ukucwangciswa nokwenziwa ngokweenkcukacha zonke. Wayengekho nto imfutshane ngokumangalisayo ngalo lonke ixesha lokucwangciswa kunye nokwenza umcimbi.
Ubhaliso kwi-Intanethi - Abazimasi banokuhlawula kwi-Intanethi kwaye sinoluhlu lweendwendwe esangweni, kunye ne-iPad apho banokuhlawula khona ngecredit card. Endaweni yamatikiti, sahambisa Iibhanti zesihlahla ezinombala apho abaxhasi, abantu abadala, abantwana kunye neebhendi bonke babenombala wabo wokuchonga ngokulula.
Uphawu -Sidinga izinto zentengiso, iimephu, ikhaphethi ebomvu yeefoto, iibhena kunye neeflaya… kwaye sisebenzisana nenkampani emangalisayo I-PERQ ukwenza ezo zinto zenziwe.
amabhaso - I-PERQ yacwangciswa yabo Iivenkilana zeFATWIN Kumsitho apho bonke abazimeleyo banokubhalisa baze baphumelele amabhaso. Oku kwanda kweenyawo zendlela kwiholo lethu lobuchwephesha kwaye abo bezimasa bonke bagoduka benomvuzo!
isandi -Andikwazi ukugxininisa indlela ebaluleke ngayo isandi. Ngomlinganiso olungileyo womculo kunye nabantu, wonke umntu wayenokudubuleka kumsitho ngaphandle kokuba ungxole kakhulu. Abantu babekwazi ukuba neencoko kwaye beva italente emangalisayo edlala ngasemva. Iholo lobuchwephesha laliphantsi kwenotshi ukuze abaxhasi bafumane ingqwalaselo engakumbi. Imisebenzi yePyramid yesandi ekhokelwa ngu UMike Ottinger Khokela isandi kwaye sasimangalisa!
I-T-Shirts - Imithombo yeendaba yoBugcisa Uyile i-T-Shirt yesikhumbuzo somthendeleko othengisiweyo (kodwa usenakho uku-odola kwi-Intanethi apha kude kube ngoMeyi we-10). Abasebenzi banezikipa ezinabasebenzi abashicilelwe ngasemva. I-Art Press ikwaseta itafile yokuthengisa eyamkela amakhadi etyala kwaye yakha indawo yoku-odola kwi-Intanethi ukuze abantu bakwazi ukuthenga ihempe kamva!
Ukutya & Ukusela -Ukuthelekisa imenyu yaseJamani emangalisayo, sikwabhalisile ngokumangalisayo Indawo yaseNew York Pizzeria ukupaka itrakhi yabo yokutya esangweni kumsitho. Zombini ezi ndawo zithe zathengisa kakhulu… kwaye isihlwele sasilambile! Ngelixa indawo yendawo yayiyibha, sasinegumbi lebhola elikhoyo ukuba abantu bebengakhululekanga ekuseleni.
Ukutshaja ipetroli -Wonke umntu unefowuni kwaye bonke bafuna ukubizwa. Ngombulelo ngathi, IPowerqube bahambisa ipallet yeeshaja zabo ezimangalisayo kwaye wonke umntu wakwazi ukuthatha iifoto kwaye wabelana ngazo imini yonke! Iibhetri ezifileyo zithetha ukuba akukho kwabelana !!!
Ividiyo kunye neefoto -Singenise ifayile ye owona msitho umfoti kurhulumente, uPaul D'Andrea. Kwaye sasinoIsake Daniel, an umfoti wevidiyo ophumeleleyo ojolise ekubaliseni amabali eze neqela, ingqokelela yeekhamera kunye neGoPros, kunye namandla angapheliyo. (IiVidiyo zifumana ukhuphelo kwaye zixubene njengoko ndibhala oku).
Yintoni Esingazange Siyilahle?
Ngelixa yayingumnyhadala omkhulu, ndiyakholelwa ukuba siphose izinto ezimbalwa:
Iinkqubo -Inkqubo encinci yayiya kuba yinto entle yokwamkela abantu, ibonelele ngonxibelelwano olubalulekileyo, iinkcazo zabaxhasi, kunye neshedyuli yabo!
Utyelelo lwabaxhasi -Ndicinga ukuba ikhadi lesimbo seBingo apho abantu kuye kwafuneka bafumane istampu kumxhasi ngamnye ukuze badlale iFATWIN ngekuqhubekile ukugcwala kwabantu abaninzi kwitekhnoloji nganye.
Inqaku nje-ndityunjelwe i Indoda kunye noMfazi woNyaka umkhankaso kwaye usenako nikela nge-10 kaMeyi!
tags: alcoholizitishi zokutshajasadittoe prukuselaisiganekoulawulo lomsithoumcimbi we-facebookumbhiyozoUluhlu lokujonga umnyhadalaukutyamike ottingerumculoprEyobudlelwane boluntuIsandi sepiramidi siyasebenzaIintengiso zentlaloukunyuswa kwentlaloIsandiuSteve gerardii-t shirti-t-shirtsIndawo
Amacebo aphambili kuThengiso nge-imeyile